Faahfaahino Laga Helayo Weeraro Ka Kala Dhacay Gobalo Dhaca Konfurta Somali. – Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo Weeraro Ka Kala Dhacay Gobalo Dhaca Konfurta Somali.
Waxaa sii kor dhaya khasaaraha maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka kasoo gaartay weeraro kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobalada Banaadir Sh.hoose Baay iyo gobalka Jubbada hoose.
Gobalka Banaadir waxaa gaari ay la socdeen maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka qarax miino lagula beegsaday qeybo ka mid ah xaafada Waxar cadde ee degmada Hilwaa.
Qaraxan ayaa sababay burburka gaari Kaarib ah oo ay maleeshiyaatka dowlada federaalka lasocdeen’waxaa qaraxa ku dhintay hal askari labo kalane waa ay ku dhaawacmeen oo isla maleeshiyaatka dowlada ah.
Sidoo kale qarax ka dhacay goob isbaaro u ah dowlada federaalka oo ku taala Tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimashada 4 askari oo ka tirsan dowlada Ridada federaalka.
Gobalka Shabeelada hoose rag hubeysan ayaa askari ka tirsan dowlada federaalka ku dilay gudaha degmada Qoryooley oo ka mid ah goobaha shisheeyaha iyo maleeshiyaatka dowlada kaga suganyihiin gobalka Shabeelada hoose.
Gobalka Baay sidoo kale rag hubeysan waxey gudaha degmada Diinsoor ku dileen askari ka tirsan dowlada Federaalka’iyadoona ragii dilka geystay goobta si nabad ah ay kaga baxsadeen.
Gobalka Jubbada hoose qarax gudaha magaalada Kismaayo lagula beegsaday maleeshiyaatka maamulka Ashahaado la dirirka Axmed Madoobe ayaa sababay dhimashada saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaatka maamulkaasi.
Weeraradan isugu jira dilalka iyo qaraxyada waxaa mas’uuliyadooda sheegtay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo si joogta ah u weerarta shisheeyaha soo duulay iyo kuwa dowlada federaalka.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacadda Andalus 13-03-1438 Hijri.
Next: Dhageyso Darsiga 20-aad Ee Kitaabka Akhlaaqul Mujaahid.